Muva nje, ngenkuthalo uxoxa ezifana isithembu eRussia. Lolu hlobo ubudlelwane emkhayeni akuyona sici isiko kanye namasiko of the state. Kodwa namuhla lo mbuzo ngempela olufanele for labantu ahlukahlukene. Sizokwenza ukuzama ukuqonda ukuthi yini futhi bangaki abafazi, isithembu uvumelekile ukuba abe indoda eyodwa kuya Ikhodi Umkhaya Russian Federation.
Isithembu kanye polyandry - engajwayelekile baseRussia izinhlobo umndeni
Emazweni amaningi yesimanje emhlabeni imishado ngokusemthethweni monogamous kuphela baziwa ezingeni wombuso. Kumayelana umndeni Izinyunyana somshado sidalwe ngomhlaka- ngazimbili yabo "indoda + owesifazane." Ukushada, makoti ngamunye uyafunga nothando lokuhamba futhi ukuhlonipha isinqumo sakhe, bese ugcine kuye abathembekile.
Naphezu kokwanda imishado monogamous kwezinye izifundazwe, ezendabuko, noma okungenani kubhekwe ubudlelwano evumelekile umndeni esithenjini. Imishado enjalo ngokuthi poliginichnymi (isithembu) kanye polyandrous (polyandry). Ochwepheshe bakholelwa ukuthi Esimeni esinjalo kungaba umndeni kwezinye izimo eziphuthumayo. Ngokwesibonelo, ngemva emikhulu izinhlekelele, izimpi noma ezindaweni lapho, ngesizathu esithile kwadingeka amadoda kancane ubudala enzalo.
Kuyaphawuleka ukuthi isithembu eRussia akuyona ukusabalala kanye bakucabange kuyinsakavukela, naphezu ezihlukahlukene ocebile Amakhasi edabukisayo yomlando yezwe.
Umthetho we Russian Federation ngesiphetho kwemishado
Esihlokweni 14 wamanje Family Code of Russia wakwenza kwacaca ukuthi umshado ungase ufake kuphela abantu abangashadile ngesikhathi isicelo kuMbhalisi. It kuvela ukuthi kugxile embuzweni othi: "Ingabe eRussia wasivumela isithembu namuhla" - impendulo ingucha. Ngaphezu kwalokho, kusukela umbono sesimilo namasiko, ukuphinga noma "yethenisi" indoda khulula - wabasola futhi lomkhuba kungamukeleki.
Umthetho wase-USSR kwakukhona kanye isihloko, esinikela izinhlawulo lobugebengu abantu Sangena lomshado oyisithembu. Namuhla, isithembu eRussia ibhekwa ukukhuthazela okukhulu, kodwa akuvunyelwe ngokomthetho.
Kuyadabukisa ukuba amakhosikazi amaningi eRussia yesimanje ngempela?
Imiphumela abathandwayo abonisa wesifundo sezenhlalo kanye yokubala abantu. Ngo-2002, kwatholakala ukuthi eRussia inani abesifazane abashadile cishe 70 000 abantu abangaphezu kuka inani amadoda ashadile. Lapho izintombi zasesigodlweni abayeni abazibheka awukashadi? Ingabe isithembu eRussia isasekhona? Abantu abaningi namuhla bakholelwa ukuthi into esemqoka - ". nobuhlobo bomuntu siqu, hhayi ukugaywa kwezinzuzo umbhalisi" Ngenxa yalesi sizathu kunzima ukusungula eziningi kanjani esimweni zangempela imibhangqwana.
Njengoba isithembu - nezitha lokhu uhlobo umshado baphikisa ngokuthi inkinga itholakala ukukhuthazwa kwabokufika zabo, ivela emazweni amaSulumane (lapho isithembu bavunyelwa).
Nokho, akubona bonke ngakho elula. Amadoda amaningi Russian siphile iminyaka, nge imikhaya eminingana. Sikhuluma eside ubudlelwano siqu intombi eseceleni ngaphandle isehlukaniso olusemthethweni nomkakhe. Ngokuphawulekayo, isimo sengqondo Russian ezimweni ezinjalo waqonda njengoba "umshado ubuningi." Ngisho noma "abafazi" olungekho emthethweni Bangamadodana indoda eshadile, futhi uyaqaphela kubo, umphakathi ngokuvamile omubi hhayi ngempela lo mama. Ngenxa yokuthi "usho nje ayethanda." Kodwa is khona ubuhlobo uthando nomuntu okungesiye esemthethweni / womshado wakhe akumele ulinganiswa isithembu?
Kufanele yini silindzele kutsi kwemukelwa umthetho ku isithembu?
Ngo-1999, umongameli wase-Ingushetia, Aushev wakhipha umyalo ovumela isithembu kuleli zwe. Ngenxa yokuthi umthetho ku isithembu eRussia ngaleso sikhathi kungacatshangelwa nokucatshangelwa, uMongameli Russian Boris Yeltsin ngokushesha quashed ukuthi isinqumo. Kusukela ngaleso sikhathi, ezingeni zomthetho kanye zomthetho, udaba engakaze icatshangwe.
Ngokuphawulekayo, amaSulumane amaningi aphila kule uthi, lapho isithembu kungavunyelwe, asakwazi ngemvume kubo. Inkinga ayikho umthetho. Ngokomthetho nesithembu besilisa ibe nemfati munye kuphela ngokuhambisana Ikhodi Family. Inyunyana Umkhaya nabafazi yesibili futhi okwalandela uphetha esontweni.
Lokhu kwenzeka ezweni lakithi. Article isithembu eRussia neze ayikwazanga ukwenza ngcono isimo ngenxa nzima ukwephulwa Provability. Mhlawumbe kakhulu ngempumelelo uzokhuthaza amagugu umndeni kanye namasiko wakudala Russian?
Njengoba RVP bangene Russia?
Inetha elivimba omiyane lapho i-Windows plastic: ukufakwa
Indlela esiphatha ngayo hemorrhoids? Amakhandlela namafutha
Bob Trendy ne esiphongweni emifushane (isithombe)
Indlela ukuqeda Gilbert Syndrome?